ओलीको अनुपस्थितिमा प्रचण्डले फेरी बोलाए गोप्य बैठक, को-को भए सहभागी, के जुट्यो सहमति ? — Sanchar Kendra
ओलीको अनुपस्थितिमा प्रचण्डले फेरी बोलाए गोप्य बैठक, को-को भए सहभागी, के जुट्यो सहमति ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली विदेशमा रहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीमा सक्रिय भएका छन् । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ । दाहालले एकीकरण प्रक्रियालगायत विषयमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग व्यक्तिगत छलफल तीव्र पारेका हुन्। दाहालले दिन दिनयता नेताहरूलाई निवासमै बोलाएर छलफल गर्दै आएका छन्। ‘अध्यक्ष (दाहाल) अहिले पार्टी काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। पार्टी नेताहरूसँगको निरन्तर आन्तरिक छलफल र संवादमा हुनुहुन्छ,’ दाहालको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘छलफलका लागि आवश्यक ठानिएका सचिवालय र स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई बोलाएर कुराकानी गरिरहनुभएको छ।’
दाहालले बुधबार वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग झन्डै तीन घन्टा खुमलटारमा छलफल गरे। दुई नेताबीच कार्यविभाजन, एकता प्रक्रिया, राजनीतिक परिदृश्य र पार्टी कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। दाहालसँग भेटेका खनालले पनि केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन र बाँकी एकता प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताए। ‘एकता प्रक्रिया टुंग्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। त्यसलाई केकसरी सचिवालय बैठकबाटै टुंग्याउने भन्नेमा छलफल भयो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकता प्रक्रिया टुंगो लगाएर देशव्यापी राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ देखिनुहुन्छ। मेरो पनि त्यही चिन्ता छ।’
प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरबाट फर्केलगत्तै २८ साउनमा नेकपा सचिवालय बैठक बस्दैछ। साउन १३ मा उक्त बैठक बस्ने मिति तय गरेर दाहाल र ओली विदेश दौडाहामा लागेका थिए। नेकपामा केन्द्रीय नेताहरूको विभागीय जिम्मेवारीलगायतका एकतासँग सम्बन्धित कार्य टुंग्याउन बाँकी छ। दाहालले सोमबार अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रामबहादुर थापासँग पनि भेटवार्ता गरिसकेका छन्। सचिवालयमा रहेका नेताहरू कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेता वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलसँग भने दाहालले भेट गरेका छैनन्।
दाहाल १८ साउनमा ४ दिने यू्एईको पारिवारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केको भोलिपल्टै रामेछाप र सिन्धुलीको सिमानामा रहेको खैरेनीघाट (सुनकोसी) पुल उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए। दाहालले उक्त कार्यक्रममार्फत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति तिखो अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यहाँबाट फर्केपछि भने उनले २० साउनयता निवासमा पार्टी नेताहरूलाई बोलाई छलफलमा व्यस्त हुन थालेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।